Kuthetha ukuthini ukuphupha ihelikopta? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuphupha ihelikopta kunokubonakala ngathi kuyothusa kwabanye abantu, kodwa njengoko sisazi, ngaphakathi el mundo yamaphupha yonke into inokwenzeka.
Zininzi iindlela iphupha lehelikopta elinokuzibonakalisa ngalo, ke eyona nto ibalulekileyo kukuzama ukuqokelela ulwazi oluninzi ngangokunokwenzeka kwaye uthathe amanqaku ngokukhawuleza xa uvuka ephupheni.
1 Kuthetha ukuthini ukuphupha ihelikopta?
2 Ukuphupha ngokubhabha ihelikopta
3 Ukuphupha ubona iihelikopta ezininzi
4 Iphupha lokuba ihelikopta ihla
5 Ukuphupha malunga nokuthatha ihelikopta ...
6 Ukuphupha ubona omnye umntu kwihelikopta
7 Ukuphupha uhamba ngehelikopta
8 Ukuphupha ubona ihelikopta ibhabha
9 Ukuphupha ihelikopta iwa
Ukuphupha ihelikopta kuthetha isibindi kwaye amandla ukuba umphuphi ngaphakathi kwakhe ukufezekisa into.
Ngokubanzi, xa ihelikopta ibonakala emaphupheni ethu, inxulunyaniswa nobuntu bethu kunye nokukhetha okufanelekileyo. Njengoko ihelikopta inomelo lwamandla kunye nobutyebi, kuba ayisiyiyo into enexabiso eliphantsi, kude nayo, umphuphi kufuneka azi iimvakalelo zakhe ngexesha lephupha.
Nokuba, njengoko sihlala sikhankanya apha kwibhlog, ukutolikwa kwephupha kuyahluka ngokwendlela into ethile okanye imeko eyenzeka ngayo.
Umzekelo, ukuphupha ukhwele ihelikopta kwahlukile ekuphupheni ihelikopta iwe. Ke hlala ujonge kwiinkcukacha zephupha lakho, indlela oziva ngayo, indlela ovuka ngayo ...
Ukuba uphuphe ihelikopta, ukungabikho zingqondweni kwakho ukuzama ukukubonisa ukuba unokuba namabhongo kunye namandla anele ngaphakathi kuwe ukuguqula iimeko ezinzima. Ungabhabha phezulu kwaye woyise izinto ozifunayo.
Ukuphupha ngokubhabha ihelikopta
Ukuphupha ngokubhabha ihelikopta kunokutolikwa njengento elungileyo, kuba ibonisa ukuba into oyilwelayo inokuba yiprojekthi, uhambo, ikhondo lomsebenzi wobungcali, kuya kufaneleka kakhulu.
Oku kubonisa ukuba kungekudala uza kukwazi ukuvuna iziqhamo ozityalileyo unobunzima obunjalo.
Olunye utoliko olusengqiqweni lunxulumene nolawulo lwomphuphi ngaphezulu komzuzu wakhe. Uzimisele ngakumbi kwaye womelele ukulandela isigaba esitsha, nokuba sesona silungileyo ebomini bakhe.
Ukuphupha ubona iihelikopta ezininzi
Elinye iphupha elinengqiqo, kuba xa siphupha iihelikopta ezininzi kubonisa amandla ethu okuphumelela ebomini, kokubini nangobuntu. Njengoko besesitshilo ngaphambili, ihelikopta ikwangumqondiso wamabhongo, woloyiso.
Iphupha lokuba ihelikopta ihla
Xa ihelikopta ihlala emhlabeni ephupheni lakho, ibonisa ukuba ungumntu okhethekileyo oneetalente ezizodwa. Kodwa kufuneka uzisebenzise.
Ukuphupha malunga nokuthatha ihelikopta ...
Eli phupha lifuna ingqwalaselo encinci. Ukuphupha uthatha uhambo ngehelikopta kunokubonisa ukuba awuhambelani nenkcitho yakho. Kuya kufuneka uchithe ixesha elininzi, ungakhathali ngezinto ozithenga ngokungeyomfuneko.
Ukungazi kwakho kuqhuba umyalezo wokuvavanya ubomi bakho bezemali kunye nokulawula iindleko zakho. Musa ukuphuma kulawulo.
Ukuphupha ubona omnye umntu kwihelikopta
Eli phupha libonisa ukuba abo sikhuphisana nabo bakwenza uphoswe ngamathuba amahle. Lixesha lokuba ugcine iso emsebenzini wakho, inkampani yakho ...
Nokuba kwenzeka ntoni, kuvavanye amathuba akho okuba ungaphoswa nto. Kukumelwa ukuba abantu abakungqongileyo bakwinqanaba elahlukileyo, bayenyuka ngelixa ubonakala ukwindawo enye.
Ukuphupha uhamba ngehelikopta
Ukuthatha uhambo kule ndlela yothutho kuthetha ukuba izinto zihamba kakuhle kakhulu. Uya kuba namathuba amahle kakhulu okulandela izicwangciso zakho zobomi kakuhle.
Ukuphupha ubona ihelikopta ibhabha
Xa ephupheni ubona ihelikopta ibhabha, ibonisa umnqweno wokuqhubeka. Ingathi ufuna ukufezekisa into esele ibonakala, kuphela kwimbono yakho, phantse ayinakufikeleleka.
Ukuphupha ihelikopta iwa
Xa uphupha ukuwa, kuhlala kusisilumkiso. Ukuba uphuphe ubona ihelikopta, luphawu lokuba ubukhathalele ubomi bakho bobuchwephesha.
Ukuba awusebenzi, kuyinto eqhelekileyo ukuba ukhathazeke. Kodwa beka imizamo yakho kuyo kwaye uya kuba neendaba ezilungileyo kungekudala.
Njengoko ubona, ukuphupha ihelikopta kuye, kunophawu oluqinisekileyo. Eli phupha lihlala lihambelana namandla ophuphayo, ukukwazi kwakhe ukuphumelela nokuphumelela.
Ukuba ubuphupha kakhulu ngayo, ungabheja ukuba uya kuzifezekisa iinjongo zakho kwaye wonwabe kakhulu ebomini bakho.
Ngaba unomkhwa wokubhala phantsi amaphupha akho? Oku kubalulekile ukuba ufunde kwaye ukhumbule ezinye zazo. Amanye amaphupha aya kuba nengqondo emva komzuzwana, xa kutyhilwa into ebomini bokwenyani.
Kwaye njengoko ubona, eli phupha lineendlela ezininzi, kwaye banokukunceda ukuba uzimisele ukubhala amaphupha akho. Yenza lo msebenzi!
Uyabona? Kwenzeka njani ukuba ukuphupha ihelikopta kuneentsingiselo ezahlukeneyo? Ukuba uyayithanda le nqaku, yabelana ngayo nabahlobo bakho abaphuphayo.